အကြင်နာနန်း: ( SWiSH Max4 4.0 )ဆော့ဝဲဖြင့် ( Flash song ) ပြုလုပ်နည်း
( SWiSH Max4 4.0 )ဆော့ဝဲဖြင့် ( Flash song ) ပြုလုပ်နည်း
မင်္ဂလာပါနှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ကျန်းမာပါစေဗျာ ဒီတစ်ခါတင်တာလေးကတော့ ( Flash song ) ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်ချင်သူတွေအတွက်ပါ
ကျွန့်တော့်ဘလော့ကို အလည်ရောက်လာကြသော သူငယ်ချင်းတို့ရေ ကျွန်တော်လဲအလုပ် သိပ်မအားတဲ့အတွက် ပို့စ်တင်တာလေးတွေကြာသွားရင် ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ အခုတခါတော့ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် Flash song လုပ်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အာလုံးအဆင်ပြေဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးဒီပို့စ်လေးကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လွယ်ကူအောင် ပုံနဲ့ရော စာနဲ့ရောပြသထားပါတယ်။
ကဲအောက်ကပုံ(၁) လေးကနေ စကြည့်ပါမယ်ဗျ။
အောက်ပါပုံကတော့( SWiSH Max4 4.0 ) ဆော့ဝဲကိုစဖွင့်တဲ့ ပုံပါ
အဲမှာအနီရောင်နဲ့ ဝိုင်းပြထားတဲ့( movie properties..) ကို (click )နှိပ်ပါ
ပြီးရင်တော့အောက်မှာပြထားတဲ့(ပုံနံပါတ်နှစ် )ကိုဆက်ကြည့်ပါရန်
ပုံနံပါတ်( ၁ )
နံပါတ်နှစ်ပုံ( movie properties..) ကို (click )နှိပ်လိုက်ရင်အောက်ပါပုံလေးအတိုင်းဘောင်လေးကျလာပါလိပ်မယ်အဲဒီမှာ
( background color )မှာကတော့ကိုယ်အဆင်ပြေမဲ့ အရောင်ပြောင်းပေးလိုက်ပါရန်
( width )မှာကတော့ ( 800 ) ( height )မှာကတော့ ( 500 ) ပေါ့( 1000 ) (488) ထားလဲရပါတယ်
( frame rate )မှာတော့ ( 12 )ပေးလိုက်ပါ
( frame rate )ရဲ့ အောက်မှာကတော့ ( stop playing at end of movie ) မှာတော့အမှတ်ခြစ်ရင်ခြစ်ပေါ့ဗျာ
ကျနော်ကတော့မခြစ်ဘူး ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့သီချင်းဆုံးတာနဲ့အစကနေပြန်လာအောင်လို့ ပါ
( stop playing at end of movie )အောက်မှာပါသေးတယ်ဗျ( Export settings for movie ) ဆိုတာကိုကလစ်ကြည့်ပါ ( SWiSH Max4 4.0 ) မှာ( Auto )အမှန်ခြစ်ဖြစ်ပြပြီးသားဖြစ်နေပါက( ok )ကလစ်ပြီးပြန်ထွက်ပေါ့တကယ်လို့ အမှန်မခြစ်မပေးရသေးရင်အမှန်ခြစ်ပြီး( 0k )ကလစ်ပြီးပြန်ထွက်ပေါ့ဗျာ
အရေးကြီးပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျနော်တို့ လုပ်မဲ့( swf )ဖိုင်အတွက် ( setting )ချပြီးပါပြီ
ကဲနံပါတ်အစဉ်လိုက်ကလေးလိုက်ကြည့်ပေါ့ဗျာ ( နံပါတ်သုံးပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ
ပုံနံပါတ်( ၂ )
( swf )ဖိုင်အတွက် ( setting )ချပြီးပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် နောက်ခံပုံထည့်မယ်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့
အပေါ်ဆုံးဘားတန်းလေးမှာအနီရောင်နဲ့ ဝိုင်းပြထားတဲ့( Insert )ကိုကလစ်ပါ
( ပုံနံပါတ် ) လေးကိုဆက်ကြည့်ပါ
ပုံနံပါတ်( ၃ )
( Insert )ကိုကလစ်လိုက်တဲ့ ပုံပါအဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြရရင်အများကြီးပါ
ကျနော်တို့ လို စလေ့လာတဲ့ သူအဖို့ တော့ ရှင်းအောင်လို့ ပုံထည့်ရန်လို့ ရေးပြထားတဲ့ နေရာမှာကိုကြိုက်နှစ်သက်မဲ့ပုံထည့်ပေးလိုက်ပါ
( Import animation )ကတော့( mouse effect )ထည့်သုံးရင်( Import animation )ကနေကလစ်ပြီးထည့်တာပါ
( Import Image )ကနေထည့်လို့ အဆင်မပြေလို့ ပါ ( ( Import animation )ရဲ့ အောက်မှာရှိသေးတယ်ဗျ
( Import Text )ကတော့ကျနော်တို့ သီချင်းစာသားရေးထည့်ရန်အသုံးပြတာပါကျနော်ကအဲမှာမရေးပါဘူး
ပုံနံပါတ်( ၄ )
ပုံဘယ်လိုထည့်မလဲအောက်မှာပြထားပါတယ်( Import Image )ကိုကလစ်ပြီးဝင်လိုက်တဲ့ ပုံပါ
ကျနော်ကတော့ရှာရလွယ်အောင် ( Desktop )ပေါ်မှာထည့်ထားတာပါ
ပြီးရင်တော့( open )ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ
အပေါ်ကပြောပြထားတဲ့ အတိုင်း ( open )ကိုကလစ်လိုက်ရန်ကျလာတဲ့ ဘောင်ပါ
အဲမှာအနီရောင်ဝိုင်းပြထားတဲ့( Import )ကိုကလစ်ပါဒါဆိုရင်ပုံထည့်လို့ ဖြစ်ပါပြီ
ပုံထည့်ပြီးရင်တော့သီချင်းထည့့််မယ်ဘယ်လိုထည့်မလဲ ပုံနံပါတ်( ၆ )
သီချင်းဖိုင်ထည့်ရန်အတွက် အောက်ပါပုံလေးကိုကြည့်ပါ အနီရောက်နဲ့ ဝိုင်းပြထားပါတယ်ဗျာ
( Content )ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ ( ပုံနံပါတ် ( 8 ) ကိုဆက်ကြည့်ရန်
( Content )ကိုကလစ်ပေးလိုက်တဲ့ ပုံပါ အဲမှာ ( Import to library )ကိုကလစ်ပါဘောင်လေးကျလာပါလိပ်မယ်
အဲမှာ ( sound )ဆိုတာကိုကလစ်ပေးပါ
မိမိတို့ ထည့်မဲ့သီချင်းက( mp3 )ဖိုင်ဆိုဒ်ချုံ့ ပြီးသားဖြစ်နေရမှာပါ
ဥပမာ သီချင်းဖိုင်က (4MB ) လောက်ဆိုရင်( Upload )လုပ်ရင်လည်းတော်တော်ကြာပါတယ်
( Upload ) လုပ်ပြီလို့ ကိုလုပ်လိုက်တဲ့ သီချင်းကိုလိုင်းပေါ်မှာဖွင့်ကြည့်ရင်တော်တော်နဲ့ 
အဲတော့သီချင်းဖိုင်ကို ( အများဆုံး (2MBလောက်ချုံ့ ပေးထားပါ )( mp3 ) ချုံ့ ရန်ဆော့ဝဲပါအောက်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ
ပုံတွေအများအများကြီးထည့်ရင်လဲဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ ဆိုဒ်ကိုသေးနိုင်သမျှချုံ့ ပေးပါ
ကဲ ရှေ့ ဆက်ကြည့်ရအောင်
ပုံနံပါတ်( ၈ )
သီချင်းဖိုင်ထည့်ရန်အတွက် ( sound ) ဆိုတာကိုကလစ်လိုက်ရင်ကျလာတဲ့ ဘောင်လေးပါ
ထွက်လာပါလိပ်မယ်ပြီးရင်တော့( open )ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ
ပုံနံပါတ်( ၉ )
အပေါ်မှာပြောပြထားတဲ့ အတိုင်းလေး( open )ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ထွက်လာမဲ့ ဖိုင်လေးပါ
သူ့ ရဲ့ ဘေးမှာအပေါင်းပုံလေးကိုကလစ်လိုက်ပြီးရင်သီချင်းဖိုင်ကိုထပ်ကလစ်ပါပြီးရင်တော့
အောက်နားမှာအနီရောင်နဲ့ ဝိုင်းပြထားတဲ့ ( Add link to stage )ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့သီချင်း
ပုံနံပါတ်( ၁၀ )
သီချင်းဖိုင်ထည့်ပြီးသွားတဲ့ ပုံပါအပေါ်ဆုံးကဘားတန်းလေးမှာ ( play ကြည့်ပါ )
သီချင်းဖိုင်ထည့်ပြီးသွားရင်တော့ ( သီချင်းစာသားထည့်မယ် )ပုံ ( ၁၂ )ကိုကြည့်ပါ
ပုံနံပါတ်( ၁၁ )
သီချင်းစာသားထည့်ရန်အတွက်ညာဘက်ဘေးမှာ ( T ) ကိုကလစ်ပါ
ပြီးရင်ဘယ်ဖက်ဘေးမှာဘောင်လေးပေါ်လာပါလိပ်မယ် ပုံထဲမှာပြထားတဲ့ အတိုင်းလေးလိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါ
ပုံနံပါတ်( ၁၂ )
ဖောင့်ပြောင်းပြီးသွားရင်တော့ သီချင်းစာသားထည့်မယ် ဖြစ်နိုင်ရင်သီချင်းစာသားကို
ဒီအတိုင်းတန်းမရေးပါနဲ့ ( notepad )ထဲမှာအရင်ေ၇းထားပါကပိုအဆင်ပြေပါတယ်
ကျနော်ကတော့( notepad )ထဲမှာစာသားအရင်ချရေးပြီး စာသားကိုကိုယ်ထားချင်တဲ့ နေရာလေးမှာ
( mouse )ချပြီး( copy ) ( paste )လုပ်ထည့်တာပါ
ပုံနံပါတ်( ၁၃ )
့( notepad )ဖိုင်ထဲကနေ ( copy )လုပ်တဲ့ ပုံပါ
ပုံနံပါတ်( ၁၄ )
ဒီနေရာမှာသီချင်းစာသားထည့်တော့မယ်ဆိုရင် ( T ) ပုံလေးကိုကလစ်ပြီးကိုယ်ထားချင်တဲ့ နေရာလေးမှာ ( MOUSE ) ချပြီး ကလစ်ဆွဲသွားပါပြီးရင်တော့( Right Click နှိပ်ပါ Paste လုပ်ပေးပါပုံမှာပြထားတဲ့ အ
ပုံနံပါတ်( ၁၅ )
သီချင်းစာသားအသွားအလာကိုကြည့်ပြီ့း အစဉ်လိုက်ကလေး ( Effect )ထည့်ပေးရမှာပါ
တစ်ပုဒ်လုံးထည့်လို့ ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ ကြည့်လို့ မလှပါဘူး
အဲတော့သီချင်းရဲ့ အသွားလာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ အပုဒ်နဲ့ သူအဝင်ထွက်ကလေးညီအောင်ကြည့်ထည့်ပေးပါ
သီချင်းအဝင်ကိုကြည့်ရန်အတွက် ( play )ကိုကလစ်ပြီးသီချင်းအသွားကိုကြည့်ပါ ( ဥပမာ ) ( 440 )မှာသီချင်း
စဝင်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ ( 440 )အောက်နားလေးမှာစောစောကကိုယ်ထည့်ထားတဲ့ သီချင်းစာသား
ဖိုင်လေးရှိပါတယ်( T ) ပုံလေးနဲ့ ပါ စာသားသွားရာလမ်းကြောင်းလေးကို ( mouse ) ချပြီးနံပါတ်( 440 )အောက်တည့်တည့်မှာကလစ်ပေးပါပြီးမှတ်ပေးပါပြီးရင်တော့အနီရောင်နဲ့ ဝိုင်းပြထားတဲ့ ( Add Effect )ကိုကလစ်ပေးပါ
ပုံ( ၁၇ ) ကိုဆက်ကြည့်ပါ
ပုံနံပါတ်( ၁၆ )
အနီရောင်နဲ့ ဝိုင်းပြထားတဲ့ နေရာတွေကတော့ ( Effect ) တွေပါမိမိကြိုက်နှင့်သက်တဲ့( Effect in ) ကိုရှာပါ ကျနော်ကတော့( wild - fade in )ဆိုတာကိုအနီရောင်ဝိုင်းတဲ့( Effect ) ထည့်ထားတာပါ ( Effect )တွေကအများကြီးပါမိမိကြိုက်နှစ်သက်မဲ့ Effect ကိုကလစ်တစ်ချက်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ
ကဲ သီချင်းတစ်ကြောင်းအဆုံးမှာလဲအပေါ်ကပြောသလိုပေါ့ သီချင်းသွားရာလမ်းကြောင်းလေးကိုနံပါတ်စဉ်အတိုင်းလေးကြည့်ပြီး ( Effect out ) ဆိုတာထည့်ပေးရမှာပါ
စိတ်တော့ရှည်ရပမယ် ( Effect )ထည့်ရန်အတွက် အောက်ပါပုံနံပါတ်( ၁၈ )ဆက်ကြည့်ပါ
ပုံနံပါတ်( ၁၇ )
ကျနော်ကတော့သီချင်းစာသားကိုအပုဒ်လိုက်မထည့်ပါဘူးကြည့်လို့ အဆင်မပြေလို့ ပါ
သီချင်းရဲ့ အစမှာ( Effect in ) ဆိုတာလေးထည့်ပြီးသီချင်းအပိတ်လေးမှာတော( Effect out ) ကလေးခံထည့်ရမှာပါ
ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကတော့( သီချင်းစာသားကိုသီချင်းရဲ့ အသွားအလာလေးကိုကြည့်ပြီးထည့်ရမှာပါအပေါ်ကဘားတန်းလေးမှာသီချင်းသွားလမ်းကြောင်းလေးကိုသေချာကြည့်ပါ
သီချင်းသွားလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရန်အတွက် အပေါ်ဆုံးဘားတန်းမှာ( PLAY ) ကိုကလစ်ပြီးသီချင်းအသွားအလာကိုကြည့်ပါ ( အခုပြောပြနေရင်းနမူနာလိုက်လုပ်ပြတဲ့ ပုံပါ ) ဥပမာသီချင်းက ( 440 )မှာသီချင်းစဝင်ပြီ်း နံပါတ်( 500 )မှာဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဆုံးသွားတဲ့ နေရာအထိ( Effect in ) ထည့်ပြီး( 500 ) နေရာရောက်အောင်( mouse ) ချနှိပ်ပြီးဆွဲချိန်ပေးပါပြီးရင်တော့ညာဘက်အခြမ်းမှာ အနီရောင်ဝိုင်းပြထားတဲ့ ( Effect ) ကိုကလစ်ပြီးစားသားအဝင်အထွက်အသွားလာကာလာကအစပေါ့ချိန်ပေးပါ
ပုံနံပါတ်( ၁၈ )
အပေါ်မှာပြောပြထားတဲ့ အတိုင်းလေးစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သီချင်းစာသားတွေ( Effect ) တွေလိုက်ထည့်ပြီးသွားရင်တော့
သီချင်းဖိုင်ထုတ်မယ်သီချင်းဖိုင်ထုတ်ရန်အတွက်အပေါ်ဆုံးကဘားတန်းမှာ( File ) ကိုကလစ်ပါ
ပုံနံပါတ်( 20 )ကိုဆက်ကြည့်ပါ
သီချင်းဖိုင်ထုတ်ရင်အတွက်( File ) ဆိုတာကိုကလစ်လိုက်ရင်ကျလာတဲ့ ဘောင်လေးပါ ( export )ကိုကလစ်ပြီး
( SWF )ဆိုတာကိုကလစ်ပြီးမိမိကြိုက်နှစ်သက်မဲ့ နေရာမှာသိမ်းထားလိုက်ပေါ့ဗျာ
နောက်ထပ်( Flash song )အတွက်(mouse effect )ထည့်နည်းတွေတင်ပေးပါဦးမယ် ဒီလောက်ဆိုရင် ( Flash song )လုပ်နည်းလေးကိုသိလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်း
( kominminaung1234@gmail.com) ( mmminmin09@gmail.com )သို့ မေးပို့ ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ
( Flash song )လေးတွေလုပ်ရင်းနှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ကျန်းမာပါစေဗျာ
( SWiSH Max4 4.0 )ဆော့ဝဲဒေါင်းရန်
( mp3 ခြုံ့ ရန်ဆော့ဝဲဒေါင်းရန် )
( မှတ်ချက် )= ပုံတွေသေးနေလို့ သိပ်မမြင်ရဘူးဆိုလျှင်ပုံပေါ်ကို( Right Click ) နှိပ်ပြီး ( open link in new tab )ကိုကလစ်ပြီးပုံအကြီးနိုင်ပါတယ်)အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ
Posted by (အကြင်နာနန်း)
Anonymous11 April 2013 at 20:15It's amazing to go to see this web page and reading the views of all colleagues concerning this article, while I am also keen of getting familiarity.Also visit my web blog ... Sant Ritz - FloorplansReplyDeleteAnonymous14 May 2013 at 02:33While prices can go as high as several thousand dollars, quality above ground pools are also available for onlyasmall amount as $780. Fourth, they ought to be able to stay fog-free to getalong time without having to continuously take them out and wet the inner surface. Thus form of pool is the most suitable for families with small children.Finding the top swimming goggles is vital for anyone, whether they may beacompetitive or recreational swimmer. Sometimes, fins and kickboards are available for use while with the pool since they're good tools for the workout.Takealook at my blog ... how to swim fasterReplyDeleteAdd commentLoad more...
အကြင်နာနန်းဆိုဒ်ကို Android ဖုန်းများမှ အလွယ်တကူဝင်ရောက်
ဖတ်ရှူ့ နိုင်ရန်အတွက် apk ဖိုင်လေးပြုလုပ်ထားပါသည် (offline) ဖြင့်ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ် Android ဖုန်းအသုံးပြုကြတဲ့ စာချစ်ပရိပ်သတ်များအားလုံး...
အောက်မှာဒေါင်းယူပြီး မိမိဖုန်းမှာ install ပြုလုပ်၍ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှူ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ လေ့လာစရာဝက်ဆိုဒ်လိပ်စာများ
Burma IT Share
CAD for Myn
to visit world famous museums online with google
to customize google talk
google photo slide maker
to short the url with google
to create the set of items
to discover local recommandations powered by you and your friends
to monitor the latest news story with google alert
to let the people decide our ideas
to jumb to the google apps from dashboard
lean back and watch youtube videos
to learn about our body with google
to find the quotes by google
to explore the new or old news stories
to browse news and magazines
auto complete suggestions as you type
free softwares by google
to search movie showtimes with google
bookmarks with google
tour the city with google
to learn about sky with google
to explore the new or old news storie
to learn about moon with google
to learn about mars with google
google 3d models collection
to make the own map with google
to collect and display information about ourselves
personal health record services
to import and visualize tables online
to know the stock market quotes, news, currency conversions
translate the languages by google
dictionaries by google
google contacts book
google online voicemail service
to checkout the online shopping by google
to search scholorly papers by google
to search webpages by google
to search images by google
to search websites by google
to search the blogs by google
to make the groups on the line by google
to makeawebsite by google
to shop on the line by google
to read international news by google
to get maps from google
webmasters tools by google
to search e-books by google
blogging by google
google videos service
google reader service
google e-mail service
to make money in blogs and websites
to search the popular things by google
3d modelling and drawing by google
to feed blogs and websites by google
google documents service
google notebook service
to track the friends Via phone internet (or)computer internet by google latitude
analytics for blogs and websites by google
google customize page
Yellow Map Page
E mailလိပ်စာရေးရန် Labels
mobile software များ
Photo software များ
PhotoScape Software အသုံးပြုနည်း
Run Command များ
wifi hack software များ
Win Rar 32 bit - 64 bit.
window7theme background
Windows Media Player Skins ( 72 )
Zawgyi Font for Windows764bit
အကြင်နာနန်းBLOGသည် ( 10 . 14 / 2011 )စတင်ဖွင့်လစ်ခဲ့ သည်. Template images by enot-poloskun. Powered by Blogger.